Saylici oo reer Awdal aflagaadeeyay: ma duushaan maxaan madaar dhisnaa iyo dekeda Saylac - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
C/raxmaan Saylici oo reer Awdal ku qasaareen 9-kii sano ee uu ku fadhiyay magaca reer Awdal maamulka beesha dhexe ayaa reer Awdal aflagaadeeyay kuna sheegay dad aan duulin oo Hindiya oo meeshay degeen iska fadhiya. Ma dadkaas ayaa madaar loo dhisaa.
Wuxuu kaloo reer Awdal u dhiibey sheeko buga oo uu yiri ”waxa ku qoran heshiiska DP World in dekedda labaad tahay Saylac markay ka dhergaan dekedda Berbera haddii wax walba u suuragalaan taas oo ah been cad. Saylici waxaan leenahay Meesha ay ku qoran tahay waxaasi reer Awdal u soo bandhin ayuu yiri Xuseen Warsame oo Hargeysa jooga.
Mushkiladu waxay ka jirtaa dadkii reer Awdal oo quus gooyay markii jufo-jufo loo kala jabiyay oo hadda wax kasta lagu oran karo hortooda ayuu raaciyay Xuseen Warsame. Boqolkiiba 90 dadka reer Boorama ma soo bixin, waxa soo baxay dad lacago la siiyay iyo shaqaalihii maamulka.